merolagani - ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा प्रेमीलाई आयातित गुलाफ !
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा प्रेमीलाई आयातित गुलाफ !
यस वर्षको प्रणय दिवसका लागि एक करोड ५० लाख मूल्यको एक लाख ६० हजार ‘स्टिम’ गुलाफ आयात गरिएको छ । माग बढेकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गुलाफको मूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष एक करोड २५ लाख मूल्यको गुलाफ आयात भएको थियो ।
बजारमा माग बढेकाले भारतबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा धेरै परिमाणमा फूल आयात गरिएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले जानकारी दिएको छ । यस दिवसमा खपत हुने दुई लाख स्टिममध्ये एक लाख ६० हजार बाहिरी देशबाट ल्याइको र ४० हजार स्टिम नेपालको उत्पादन रहेको छ ।
तिहारमा सयपत्री र प्रणय दिवसमा रातो गुलाफ आयात गर्नुपरे पनि मखमली र गोदावरी फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ । अष्ट्रेलिया र मलेशियामा धेरै नेपाली बसोबास गर्ने गरेकाले तिहारमा ती देशमा मखमली फूल निर्यातसमेत हुन थालेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘भ्यालेन्टाइन डे’का लागि ८० प्रतिशत गुलाफ भारतबाट आयात गरिने,मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्ने